एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?
काठमाडौं : एनआरएन इन्फ्रस्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको करिब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ आज शुक्रबार साउन १६ गतेबाट बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो । कुल ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्तामध्ये ५% अर्थात १ लाख ६९ हजार ९०२ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, २% अर्थात ६७ हजार ९६१ किता सेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ । यसबाट बाँकी रहेको ३१ लाख ६० हजार १८३ कित्तामा भने सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले यो सेयरमा साउन २१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस समयभित्र सबै सेयर बिक्री नभएमा भदौ ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
यसमा न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ३१ लाख ६० हजार १८० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गरेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका अलावा मेरोसयर सफ्टवेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
हेर्नुहोस् कम्पनी कस्तो छ ?
कम्पनीको आव्हानपत्र हेर्नुहोस् ।